Taageereyaasha KULMIYE ee Burco oo banaan baxyo waaweyn ka dhigay Magaaladda Burco | Somaliland.Org
October 31, 2012	Burco (Somaliland.Org)- Wasiirka wasaaradda arimaha gudaha Somaliland Maxamed Nuur Caraale (Duur) iyo wafti uu hugaaminaayay oo ka tirsan xisbiga Kulmiye iyo golaha baarlamaanka Somaliland ayaa maanta taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer kala qaybgalay ,banaanbaxa ololaha doorashadda golaha deegaanka oo gashay maalintii Sedexaad .
Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ee magaalada Burco banaanbaxa doorashadda ka dhigay oo tiradoodu aad u badnayd ayaa markii danbe isugu tigay fagaaraha Khayriyadda Burco ,halkaasi oo ay kala hadleen musharixiinta golaha deegaanka Xisbiga Kulmiye uga sharaxan degmadda Burco ,waftigan Xukuumadda sare ka socday masuuliyiinta Kulmiye iyo maamulka gobolka Togdheer.
Wasiirka Arimaha gudaha Maxamed Nuur Caraale (Duur) oo fagaarahaasi kala hadlay taageerayaasha Xisbiga Kulmiye ayaa sharaxaad ka bixiyay mashaariicda wax qabad ee Xukuumadda Kulmiye ka fulisay gobolka Togdheer ,waxaanu kula dardaarmay Taageerayaasha in ay xil adag iska saaraan xoojinta nabadgelydada gobolka waxaanu yidhi isagoo arimaahaasi ka hadlaaya .
” Waxaan idin xusuusinayaa waxaad tihiin taageerayaashii xisbiga talada haya ee Kulmiye ,waxa laydiinka baahanyahay tudhaale gaar ah in aad la timaadaan oo aad idinku noqotaan qaar dulqaata oo nabada ilaaliya oo wanaaga dhawra iyo wada noolaashaha waayo masuuliyad gaar ah ayaa idin saaran dhamaana xisbiyada walaalo ayaynu nahay codkana waynu ku tartamaynaa ,waal-nimada shacabka iyo isku xidhnaantuna dhimanmayso codkeenana waynu la soo baxaynaa qaranimadeenana waynu ilaashanaynaa ” Sidaasi ayuu Md. Duur yidhi.
Wasiirka ayaa sheegay mudadii ay xilka haysay Xukuumadda Kulmiye ee Axmed Siilaanyo hugaamiyo in ay dalka waxbadani iska badeleen isla markaana ay mashaariico ka fulisay gobolka Togdheer ,taasi oo uu xusay in ay lacagtii Giinbaaru u horeysay ,waxaanu ku adkeeyay taageerayaasha Xisbiga Kulmiye in ay awooda saaraan sidii ay musharixiinta xisbiga ee Degmadda Burco usoo saari-lahaayeen iyagoo aqoontooda ku dooranaaya .
Badhasaabka gobolka Togdheer Cabdoo Axmed Aayar oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku wargaliyay taageerayaasha xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer in ay awooda saaraan sidii ay codkooda usiin lahaayeen 21-ka musharax ee golaha deegaanka Burco uga sharaxan kuwaasi oo uu xusay in ay khibrad aqooneed u leeyihiin hawsha ay u taaganyihiin ,waxaanu dadweynaha gobolka usoo jeediyay in ay dhinaca aminga kala shaqeeyaan ciidamada booliska .
Sidoo kale waxa iyana ka mid ahaa masuuliyiintii Kulmiye ee halkaasi ka hadlay Guddoomiye ku xigeenka Labaad ee xisbiga Kulmiye Muj. Maxamed Kaahin Axmed ,Xil. Cali Mareexaan ,Guddoomiyaha Kulmiye ee gobolka Togdheer iyo musharixiinta golaha deegaanka Burco u taagan ee xisbiga Kulmiye waxaaney dhamaantood ka xogwarameen awooda xisbiga Kulmiye ee gobolka Togdheer ,waxyaabihii uu qabtay dhawrkii Sano ee uu xilka hayay iyo himilooyinkiisa danbe ,waxaaney u mahad-naqeen sida ay taageerayaasha Kulmiye sida ay cududooda u muujeyeen.
Banaanbaxan taageerayaasha Kulmiye maanta ka dhigeen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ahaa kii ugu balaadhnaa ee ay ururadda siyaasadu Burco ka dhigaan Sedexdii cisho ee uu socday Kaambaynka doorashadda golaha deegaanka.
Previous PostXisbiga KULMIYE oo Awoodiisa Ku Muujiyay Mawjado Taageereyaal ah oo qarqiyay Gobolada dalkaNext Post“Talaabo ha laga qaado axsaabta leh aqbali mayno natiijada doorashada”	Blog